Indlu Eyakhiwe Ngamapulangwe - I-Airbnb
Brewster, Kansas, i-United States
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Christina
Indlu Eyakhiwe Ngamapulangwe itholakala edolobheni elincane, lasemaphandleni lase-Brewster, ngaphandle nje kwe-interstate 70 phakathi kwe-Colby ne-Goodland. Inefenisha yombhede olala abantu ababili ezingeni eliphansi kanye nombhede olala abantu ababili ku-loft. I-loft ingasetshenziswa ngesitebhisi esidonsayo.
Ifriji encane, i-Keurig, ne-microwave kuyatholakala. Ayikho i-wifi noma i-TV, inkundla yokudlala eseduze, amabhuloho amathathu avela esitolo esincane sokudla & ibhikawozi. Isitolo sinikeza isidlo sasemini nesidlo sakusihlwa. Ibhikawozi inikeza isidlo sasekuseni nesidlo sasemini. Sicela, kungabikho izilwane ezifuywayo, ukubhema noma amaphathi amakhulu.
Indawo enkulu yangaphandle kanye nokupaka. Ukuzingenela ngephedi eyinhloko. Imidlalo, amaphazili, nezincwadi zokuzijabulisa komndeni kanye nedolobha elithulile lokuhamba ngezinyawo noma nje ukuhlala nokujabulela imvelo yaseMelika yasemaphandleni.
Kunenkundla yokudlala yesikole etholakala endaweni eyodwa ukusuka e-The Cabin.
Ngitholakala ngocingo, i-imeyili noma i-SMS.